Ziziphi iindlela zokwakha i-backlink fast?
Ukuqhagamshelana nesakhiwo yinkalo ephambili kunye nenselele enkulu yokuphuculwa kweenjini zokukhangela. Ichaphazela isikhundla sendawo ye-website kwaye idala i-Google ingcinga malunga negama ethile. Indima yeenxibelelwano ezingenayo kwi-SEO iboniswe kwinani lezinto ezikhoyo zokufunda.
Nangona kunjalo, ezinye i-webmasters zinezinkathazo malunga neempembelelo kunye neenzuzo zezikhonkco ezingenayo. Bathi ukuthembela kweGoogle kwi-backlink kunciphisa. Nangona kunjalo, ndingathanda ukuwathabatha apho. I-backlink ayikwazi ukunyamalalala nayiphi na ixa nje xa idlala indima ebalulekileyo kwi-Google ranking algorithm. Uphando olutshanje lubonisa ukuba inani leenkundla ezidibanisa nekhasi elihambelana neendawo eziphezulu ngaphezu kweyiphi na into. Ukuba awuwuthathi ngokukodwa le datha, zama ukuphanda ngokwakho. Faka igama lakho elingundoqo kwiSemalt Web Analyzer kwaye ujonge amanqaku aphezulu aphezulu. Zonke zinamaqela amaninzi angenayo. Nangona igama elingundoqo lijoliswe kukuncintisana kakhulu, iiwebhusayithi ezikumgangatho we-TOP ziza kunamaqela amaninzi angenayo.
Kule nqaku, siza kuxubusha indlela yokwakha i-backlinks ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Sisebenzisile ezinye zezicwangciso zokwakha izixhumanisi zokukhulisa izikhundla zethu kwiwebsite. Sithole iziphumo ezintle kwaye sakhula iingxelo zekhonkco zabaxhasi bethu.
Ngoko, masiqhubeke! Ngethemba ukuba le ngcaciso iya kuba neyakho ukufumana ijusi yokuxhumela esemgangathweni kwisayithi lakho.
Izicwangciso ezinokuthi zenze i-backlinks ngokukhawuleza nangokuphumelelayo
Yakha iziteshi zamaqhagamshelo kunye neenjini zokusesha
lawula, iiwebhsayithi ezixhumene nawe kwixesha elidlulileyo ziyakwazi ukwenza oku kwakhona. Benza oko kuba sele bebalandeli bezinto ozenzayo nokubhala. Basenokwenzeka ukuba banomdla kunoma yimuphi umxholo omtsha owamshicilelayo uze udibanise nawo. Umfanekiso onayo idatha yonke imithombo yewebhu edibanise nawe, ngoko ke, unokuthi unomdla kumxholo wakho omtsha. Ngokuqinisekileyo kuya kuba namandla ogugu kwi-intanethi yakho ye-intanethi njengoko unokufumana ukuhamba ngokukhawuleza kwezithuthi ezingenayo kwisayithi lakho.
Unokwakha isiseko esinjalo usebenzisa i-CSE ye-Google. Yonke into oyifunayo kukulandela amanyathelo:
Fumana imithombo yewebhu sele iqhagamshelene nawe;
Ukulayisha le mithombo ibe yikhompyutheni yokusesha;
Fumana ithemba lokuxhamla kwixesha elizayo.
Bhalisela kwi-Google CSE ithuluzi kwaye wenze i-injini entsha yokusesha apho. Emva koko faka iwebhusayithi ofuna ukuyikhangela kunye negama le-injini yakho yokukhangela yangokwezifiso. Hamba kwithebhu elandelayo uze ubone ixabiso kwi-cell A1. Kufuneka ifomathiwe njenge "domain. com. "Kufuneka ukopishe unamathisele le datha kwi" sayithi ukukhangela "kwicandelo lakho lokukhangela lwenkcukacha. Kwaye ekugqibeleni, nqakraza kwi "iqale" iqhosha.
Nangona kunjalo, ukuba ungathanda ukukhangela iipolisi ezininzi ukusuka kwiprofayili yakho ye-backlink, kufuneka udibanise isizinda esithile. Yingakho kufuneka ucofe kwi "iqhosha lokusesha injini" kwaye ungeze ezinye iisayithi. Ungakhetha ukhetho "ukongeza iiwebhusayithi ngobuninzi" kwaye ukope uluhlu lwemimandla kwibhokisi. Khetha umsebenzi "ziquka onke amaphepha kulezi ziza" kwaye nqakraza "gcina. "
Ngoku, i-injini yakho yokusesha ilungile. Ungayisebenzisa ukukhangela amathemba ekwakhiwa kwekhonkco nanini na ukushicilela isiqulatho esitsha somxholo.
Eli qhinga lokwakha unxibelelwano luya kusebenza kakuhle xa iprofayile yakho yekhonkco ikhula ngenxa yokuba unedatha yolwazi olubanzi lweemithombo zewebhu ukusesha Source .